Momba anay - Western Industry Co., Ltd.
Greenbaby dia orinasa naorina tamin'ny 2007, miaraka amina toby famokarana 30000 metatra toradroa ao amin'ny ozinina manerantany- Dongguan, Sina.
Ny orinasan-tsika fototra dia misy fizarana telo: vokatra vita amin'ny lamaody lamaody, vokatra silika maitso ary motera kely misy endrika vaovao.
Ao amin'ny orinasa misy anay, misy mpiasa 400, mpikambana ao amin'ny ekipa 20 R&D, olona 15 QA, mpivarotra 20 ary mpiasa 15 mpitantana, miaraka amin'ny tsipika fanangonana & famonosana 10, milina silika 20, milina fanindronana 15.
atrikasa maotera mandeha ho azy iray mandeha ho azy ary misaraka laboratoara ho an'ny fitsapana mifandraika amin'izany.
Greenbaby dia manam-pahaizana manokana izay ahitana fahaizana tena mahay amin'ny famolavolana, fanamboarana ary fizarana vokatra firaisana ara-nofo avo lenta toy ny Vibrators, SuckingStimulator, Bullets Vibrating, Wand massagers, Masturbators and Strokers, Dildos, Cock peratra, Ben wa Balls, Bondage Products and etc. Being
ny mpamatsy kilasy voalohany voamarina amin'ny ISO9001, ny vokatray rehetra dia nandalo tamin'ny CE & RoHS niaraka tamin'ny fitaovana ara-tontolo iainana toy ny silicone sakafo. Miorina amin'ny R&D tsara sy ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra entana, Greenbaby dia lasa mpiara-miasa stratejika miaraka amin'ny marika ambony iraisam-pirenena bebe kokoa, miaraka amin'ny vokatra aondrana any Amerika, Eropa, faritra Aziatika sy Afrikana sasany.
Ekipa R&D matanjaka tokoa no lakilen'ny fahombiazantsika. Tsy maninona na tetikasa OEM na ODM, Greenbaby dia nanangona traikefa be dia be mba hahafahan'ny mpanjifa miankina amintsika tokoa. Rehefa miverina mijery ny làlana mivoatra isika, orinasa fanta-daza maro no nanome anay fotoana hiarahana miasa. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa sarobidy, ny sehatra rehetra ao Greenbaby dia avoaka amin'ny ambaratonga avo kokoa. Ny kalitao, ny fanavaozana ary ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no Baiboly ho an'ny olona rehetra ao Greenbaby.
Ny fahaiza-manao injeniera manerantany sy ny fahaiza-mitantana amin'ny programa dia miasa amin'ny kolotsaina kilemaina kely indrindra ary fanatsarana hatrany.
Ny tanjontsika dia ny hanatsara ny fiainana.
Ny iraka ataontsika dia ny ho mpanamboatra lohalaharana sy sarobidy indrindra amin'ny indostrian'ny vokatra ara-nofo.
Ankasitrahanay ny fahaliananao an'i Greenbaby ary raisinay ny fanontanianao sy ny hevitrao. Azafady mba andefaso mailaka aminay izahay amin'ny fotoana rehetra.